Isitulo sebha yentambo yaseTshayina (i-Teak armrest) Ukwenziwa kunye neFactory |Tailong
Iseti yentsimbi ye-Rio engenastainless wUbume bonobumba obulula "H", isakhelo esomeleleyo sentsimbi esomeleleyo esinebhrashi yokugqiba unyango, itafile enkulu yeteak slats kunye neentambo ezithambileyo zokuluka ezinenxalenye yokuqinisa ngaphakathi, yonke loo nto yenza ukuba iseti yonke yebha ibonakale ilula, inesibindi, idibanise ukuqina kunye nokuqina. into ethambileyo.Uyilo oluncinci luvumela ukuba lungaze luphelelwe lixesha.Kwaye Ubugcisa obugqibeleleyo buphucula isiseko somgangatho kwizinto ezilungileyo ezikrwada, zilula kodwa zilungile.
Ukuqwalasela ukufumana indawo ekhululekile xa abantu behlala, isitulo senziwe nge-armrest kwaye sihonjiswe ngee-teak slats kwi-armrest ukuphucula imvakalelo yokuchukumisa xa abantu bebeka izandla zabo kwi-armrest.
IINTAMBO EZINGAPHANDLE EZILILEYO & EZOZIWEYO
Ukwaluka ngeentambo ezicwangcisiweyo, ezinendawo yokuqinisa kwindawo ephakathi ukuze ingabi thambileyo kuphela kodwa ihlale ihleli.Okwangoku, kukho imibala emininzi kunye nezixhobo zeentambo zokukhetha ukuyila iskimu sombala ohlukeneyo.
UYILO OLUPHELELEKILEYO WE-BAR STOOL IMILE
"Mna" uyilo lokubumba ukubopha imilenze yesitulo sebar, ukuyenza izinze kakhulu.Kwaye i-design-down design ivumela ukupakisha izitulo zebar ngokulula, ukunciphisa indawo yokugcina kwaye kube lula ukuyigcina kunye nokuhamba.
Isitulo sebha yentambo yaseRio
Iseti yentsimbi engenasici
Isitulo sebha yeArmrest
* Intambo ye-olyfin ekumgangatho ophezulu yangaphandle
*Thumeka 5mm ubukhulu beteki yaseMzantsi Melika
Isitulo sebha eRio
Umboniso weSitulo seBar yeRope yaseRio
I-Rio rope isitulo sebha esingenangalo
Ngaphambili: Rio auto.itafile yolwandiso (iglasi epholileyo yelitye)
Okulandelayo: I-Rio rope isitulo sebha esingenangalo
Isitulo sebha yentambo yaseBelgium
Isitulo sebha yeLatina
Luca textile bar isitulo
Santo intambo bar isitulo
Isitulo sebha ye-Meer